Kumisa Musoro Wemusoro: Nei Mafomu epaIndaneti Achibatsira Kuyera YAKO ROI | Martech Zone
Kumisa misoro: Nei Mafomu epaIndaneti Achibatsira Kuyera YAKO ROI
Chitatu, Kurume 29, 2017 Chitatu, Kurume 29, 2017 Steve Hartert
Vashandi vanogona kuyera ROI munguva chaiyo. Ivo vanotenga sosi, uye nekutarisa pamutengo wemasheya chero nguva, vanogona kubva vaziva kana chiyero cheRIO chiri chakanaka kana chakaipa.
Dai chete zvaive nyore kune vatengesi.
Kuyera ROI ndeimwe yemabasa akakosha kwazvo mukushambadzira. Muchokwadi, nderimwe remabasa akaomesesa atinotarisana nawo zuva nezuva. Iine rese data iro rinodurura mukati kubva kunzvimbo zhinji, inofanirwa kuve nzira yakatwasuka. Mushure mezvose, takaudzwa kuti isu tine yakawanda data kupfuura nakare kese uye tiri kushandisa zvakanakisa analytics zvishandiso. Nekudaro, hazvina basa kana uri kuwana yakawanda data kana isina kukwana uye isina kururama.
Izvo hazvina basa kuti rakakura sei kana rakasimba software yako yekuongorora ingave, zvakangonaka chete sedata raigamuchira. Zviri nyore kwazvo kuita zvisirizvo zvisarudzo zvichibva pane zvisiri izvo. Uyezve, zvinogona kuve zvinonetsa kuona izvo zvinokonzeresa zvinotyaira kutenga. Dzimwe nguva, kunyatso kuyera maitiro evatengi kunogona kunzwa sekuyedza kurovera jello kumadziro. Saka chii chaungaite kuti uve nechokwadi chekuti uri kugamuchira iro chairo data?
Shandisa Online Mafomu
Mafomu epamhepo chishandiso chine simba sezvo vachigona kuzadzwa chero kupi, kusanganisira kuburikidza nharembozha, mapiritsi kana makomputa. Kana vatengi vako vari kuwedzera kuita basa uchienda, newewo unofanira kudaro. Iwo akakwirira emazinga ekugadzirisa uye kuchinjika zvinoreva kuti iwe unogona kugadzira mafomu ayo anobatsira kuendesa mhedzisiro iwe yaunoda, senge kutungamira chizvarwa, ongororo uye mafomu emhinduro, uye kunyoreswa kwezviitiko. Kana iwe uchingoda zita uye email kero, iwe unogona kugadzira iri nyore fomu yekubatana inozviita. Saizvozvowo, kana zvaunoda zvikawedzera kumberi, senge kunyorera basa, unogona kuzviita, futi.
JotForm iri nyore kushandisa fomu muvaki:
Ngwarira kushandisa iyo boilerplate mafomu ayo akaverengerwa pamwe newebhu yako kana e-commerce masevhisi sezvo izvi zvinowanzo sanganisira zvakawandisa dhata minda, izvo zvinowanzoreva kuti urikugadzikana pane iyo data iwe yauri kutora. Seiye musiki, iwe unoziva iyo chaiyo data iwe yaunofanirwa kuita sarudzo dzakakosha, zvinoreva kuti kuva nesarudzo yekugadzirisa fomu kuti ienderane neyako nzira ndeyekufunga kwakakosha.
Tsanangura Dhata Rako
Fomu repamhepo rinokupa maturusi akanaka ekuti utore yako yakakosha data, uye nekuibvunza nenzira inokubatsira. Dzimwe dhata dzaunoda ndedzekumanikidzwa, saka unofanirwa kudoma mimwe minda sezvainodiwa fomu risati raendeswa. Izvi zvinokutadzisa kubva kugashira ruzivo rwakasarudzika uye kuve nekuita kumashure-uye-kunze email kupenga pamwe nemutengi kuti aitore, izvo zvinowanzo kutungamira mukutengesa kwakarasika. Iyo yakanaka online fomu mupi inokupa iwe iyi nhanho yekutonga.
Pamusoro pezvo, unogona kuve nechokwadi chekuti data rinofanirwa kupihwa mune chaiyo fomati, senge inosanganisira kodhi yenzvimbo nenhamba dzerunhare, kana kuti kero yeemail ine @ chiratidzo kana inosanganisira yakakodzera .com, .net kana .org, nezvimwe, chinokwana . Icho chikonzero iwe chaunoda kuita izvi ndechekuti uve nechokwadi chekuvimbika kweiyo data. Kana iwe uchibvumira vashandisi kunyora zvisina tsarukano mudhata yavo, mhedzisiro yako inogona kunge isiriyo, uye izvo zvinokunda chinangwa chekushandisa epamhepo mafomu.
Usaviga Makasitoma neMibvunzo Isingabatsiri
Kumwe kwekukanganisa kukuru uko vanhu vane mafomu epamhepo kuri kuratidza yega dhata dhata, iyo inogona kuita kuti fomu iratidzike kureba zvakanyanya uye kusanzwika Izvi zvinoita kuti vashanyi vasiye fomu yako isati yatanga nekuti zvinoita sekutora nguva yakawandisa kuipedza.
Izvo zvinonyanya kushanda kuisa zvine mamiriro ezvinhu. Izvi zvinoreva kuti kana mutengi akapa mhinduro chaiyo, inovhura seti nyowani yeminda yedhata. Semuenzaniso, kana fomu racho riine mubvunzo, senge, Ino inguva yako yekutanga kutenga chigadzirwa chedu here?, inogona kupindurwa se "hongu" kana "kwete". Ehe mhinduro inogona kuvhura mutsva mutsva yemibvunzo inobvunza kuti mutengi akadzidza sei nezve chigadzirwa chako, vangachikurudzira uye vakatsvaga kwenguva yakareba sei vasati vatenga. Kana mhinduro iri kwete, inovhura yakatarwa mibvunzo.
JotFormPfungwa ine mamiriro.
Iko kushandiswa kwemamiriro ezvinhu zvine chirevo zvinoreva kuti vatengi vanozoona chete nekupindura kumibvunzo ine chekuita navo, uye havafanirwe kusvetuka akateedzana mibvunzo isina basa. Izvi zvinowedzera mamitero ekupindura uye zvinovandudza kurongeka kwemhinduro nekuti vatengi havanzwe vachimanikidzwa kupindura mubvunzo wese, kunyangwe zvinoshanda kwavari kana kwete.
Kana fomu repamhepo rapera, iyo data inogona kufambiswa ipapo ipapo kune yako yekushandisa chishandiso chesarudzo, kungave iri raiti kana reruzivo CRM software. Sezvo iwo ruzivo inguva uye zuva rakatemwa, unogona kuiongorora munguva chaiyo. Uyezve, sezvo yega data minda inobatwa zvakasiyana, unogona kuongorora ruzivo kubva padiki diki granular nhanho kusvika padanho repamusoro macro. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuongorora yako yekushambadzira mushandirapamwe sezvairi kuitika, mune akakodzera ruzivo, uye woita kugadzirisa pazvinenge zvichidikanwa
Kutora Kudzika Kwakadzika
Sezvo fomu repamhepo rinogona kushanda semberi-kumagumo data muunganidzi wekudyidzana kwevatengi, kusanganisira mibvunzo yekutsigira uye odha dzepamhepo, unogona nyore kudzidza nhoroondo yemutengi nekambani yako. Iwe uchazoziva kangani mutengi achiraira zvigadzirwa zvako, kana kuti kangani pakave nekubatana nerutsigiro, pamwe nerudzi rwemibvunzo yakabvunzwa. Kubatsira kwekutora danho iri re data iwe unogona kuriongorora nemhando dzakasiyana dzematanho, uye wotarisa mapatani uye kugadzirisa madiki madiki vasati vaita misoro mikuru. Semuenzaniso, iwe unogona kuona kuti nekuburitswa kwechinhu chitsva chechigadzirwa, urikutora mibvunzo yakawanda nezvekutumira kwenyika dzese, saka ungangoda kugadzirisa ruzivo rwako rwekutakura uye / kana kuita kuti rive rakakurumbira pawebhusaiti yako.
Iwe unogona zvakare kushandisa iyo data kudzidza kutenga mapatani uye unzwisise kuti ndeapi vatengi vanogara vachitenga zvigadzirwa zvako pazuva rekutanga rekuburitswa. Izvi zvinogona kutungamira mukugadzirwa kweye kazhinji kirabhu yevatengi uye yakakosha sneak preview kana yekutanga kutenga windows kune ako akavimbika vatengi. Iko kugona kwe micro-musika kune vatengi vako hakuperi, sekureba sekunge iwe uine chaiyo data yekubatsira kugadzira zano.
Mafomu epamhepo anopa huwandu hwesimba uye chinjana. Izvi zvinoreva kuti unogona kukurumidza kugadzira fomu kuti utore iyo chaiyo data yaunoda kuti utore sarudzo dzebhizinesi. Uyezve, unogona kuvaka uye kuendesa mafomu aya mumaminetsi mashoma, zvinoreva kuti unogona kuongorora yako ROI nekukurumidza.
Tags: fomu yemutengifomu analyticsfomu muvakifomu kupedzisafomu datafomu mindafomu mibvunzonezvimiroJotFormonline fomu anovakaonline mafomu
Steve Hartert ndiye Chief Marketing Officer pa JotForm, inotungamira online fomu yekuvaka chishandiso. Steve ane anopfuura makore makumi matatu emakore ekushambadzira manejimendi uye akashanda nemakambani Fortune 30 uye kutanga. Ane Bachelor's degree kubva kuCalifornia State Polytechnic University, Pomona, uye MBA yekuCalifornia State University, San Bernardino.